DAAWO:-Rooble oo canaantay Guddiyada Doorashada - Idman news
Raysal wasaaraha Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa galinkii dambe ee Maanta shir kula qaatay aaladda fogaan aragga ee ZOOM-ka guddiyada doorashooyinka heer Fedaraal, heer dowlad goboleed iyo kan Xalinta Khilaafaadka.
Raysal wasaare Rooble ayaa faray guddiyada doorashooyinka iney dhowraan ilaalinta hufnaanta doorashada iyo wadashaqeynta dhexdooda ah, si doorashada ay u noqoto mid lagu kalsoonaan karo.
“Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal, Heer Dowlad-goboleed iyo Xallinta Khilaafaadku waxay leeyihiin waajibaad shaqo oo ay tahay in ay si hufan uga soo dhalaalaan. Waxa ugu weyn ee shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan waa in ay si hufan oo caddaalad ah u maamulaan doorashada iyo xallinta murannada ka dhasha, si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyay oo caddeynaya cid walba in kaalinteeda doorashada” ayuu yiri Raysal wasaare Rooble.
Raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale faray guddiyada iney ka fogaadaan wax walba oo keeni kara iney cid gaar ah u eexdaan, islamarkaana ay doorashada u maamulaan si lagi kalsoonaan karo.
“Waxaan ku boorriyay in aysan cid gaar ah u eexan, qaadan kaalin aysan lahayn, xoojiyaan wadashaqeynta dhexdooda ah, isla markaana aqbalin faragelin sharciga baal marsan, si doorashada ay maamulayaan u noqoto mid hufan oo lagu kalsoonaan karo” ayuu yiri Raysal wasaare Rooble.
Kulankaan ayaa imaanaya xili saacadahii lasoo dhaafay ay kordheen cabashooyinka laga muujinayo doorashooyinka Golaha Shacabka ee laga bilaabay deegaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug, islamarkaana ay shalay kulan waqti dheer qaatay wada yeesheen Midowga Musharaxiinta iyo Raysal wasaare Rooble, kaasoo looga hadlay walaaca Musharaxiinta ay ka muujiyeen doorashada Golaha Shacabka sida ay ku socoto.
Previous R/W Rooble oo amar siiyey gudiyada doorashada kadib kulankii Midowga Musharaxiinta
Next Daawo Muuqaal: Rooble oo habka fogaan aragga shir uu ku canaantay kula yeeshay Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal, Heer Dowlad-goboleed iyo Xallinta Khilaafaadka